Nairahaba manokana ny vahoaka Malagasy, Rtoa Violet KAKYOMYA, solontenan`ny firenena mikambana, tamin`ny dingana voalohany amin`ny fifidianana.
Nahitana taham-pahavitrihana teo amin`ny 53% mahery ka enga anie hihoatra izany amin`ny fihodinana faharoa. Manentana ny vahoaka hifidy hatrany ny iraisam-pirenena amin`ny androm-pifidianana satria zo feno amin`ny maha olom-pirenena izany.
Nijery akaiky ny fomba fiasa ara-teknika teo anivon`ny HCC ny mpanara-maso ny vondrona eoropeanina nandritra ny fikarakarana voka-pifidianana. Roa volana ao aorian`ny fihodinana faharoa kosa vao hamoaka ny tatitra ofisialy ireto mpanara-maso vahiny ireto.